Yuu ahaa Yuusuf? Maxay ahayd Calaamadiisu? - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda Yuusuf (Suuradda 12 – Yuusuf) waxay ka sheekaynaysaa Xusuusta Yuusuf. Yuusuf wuxuu ahaa wiilkii Yacquub , ina Isxaaq ), ina Ibraahim . Yacquub wuxuu dhalay laba iyo toban wiil oo midkood Yuusuf yahay. Kow iyo tobankii Yuusuf walaalihiis ahaa ayaa shirqool u maleegay, oo qorshayaashooda ka dhanka ah ayaa samaynaya Yuusuf. Sheekadan waxaa markii ugu horreysay lagu qoray Tawreedka Muuse in ka badan 3500 oo sano ka hor. sheekada buuxda ee Tawreedku lagu qoray ayaa halkaan ah. Suuradda Yuusuf (Suuradda 12 – Yuusuf) sheekadiisa ayaa halkaan. Suuradda Yuusuf waxay noo sheegaysaa in tani aysan ahayn sheeko oo kaliya laakiin
(Nabi) Yuusuf iyo walaalihiis calaamooyin yaa ugu sugan kuwa doondoona.
Suuradda Yuusuf 12: 7
Maxay tahay sheekada Yuusuf iyo walaalihiis oo ‘calaamado’ u ah kuwa raadinaya? Waxaan sheekada ka eegeynaa Tawreedka iyo Suuradda Yuusuf labadaba si aan u fahanno ‘calaamadahan’.
Hore u sujuud…?
Hal calaamad oo cad ayaa ah riyadii Yuusuf u sheegay aabbihiis Yacquub Waxay ahayd
Bal eeg! Nabi Yuusuf wuxuu ku yidhi Aabihiis Aabbow waxaan arkay kow iyo toban xiddigood iyo Qorraxda iyo Dayaxa waxaana arkay iyagoo ii sujuudsan
.Suuradda Yuusuf 12: 4
Dhamaadka sheekada, runtii waan aragnaa taas
Wuxuuna ku koryeelay labadiisii waalid carshiga, wayna u sujuudeen hortiisa. Wuxuuna yidhi Aabbow tan waa rumayn Riyadii hore, Eebana waa rumeeyay, wuuna ii Wanaagsanaa markuu Xadhiga iga soo bixiyey oo idinka soo bixiyey Cidlada. (6) markuu Shaydaanku aniga iyo walaalahay colaadiyay ka dib, Eebahay waa ogyahay waxa qarsoon wuxuu doono, Eebana waa oge falsan
.Suuradda Yuusuf 12: 100
Qur’aanka oo dhan, ‘sujuudda’ ayaa marar badan lagu xusay. Laakiin dhammaantood waxay tilmaamayaan inay u sujuuddaan Ilaaha Qaadirka ah, salaadda, Kacbada, ama mucjisooyinka Eebbe hortiisa (sida saaxiriintii Masar ee Muuse). Halkan waxaa ka reeban in uu jiro ‘sujuud’ nin (Yuusuf). Dhacdada kaliya ee la mid ah ayaa ah marka malaa’igta lagu amro inay ‘u sujuudaan’ Aadam (Ta-Ha 116 iyo Al-Caraf 11). Laakiin malaa’igtu ma ahayn bini -aadam, xeerka guud waa bini’aadanku waxay u sujuudaan Rabbiga oo keliya.
Maxay ku saabsanayd Yuusuf oo ka reebay sidaa darteed aabbihiis Yacquub iyo walaalihiis ayaa u sujuuday?
Jadwalka taariikhiga ah oo muujinaya Nebi Daanyeel iyo nebiyadii kale ee Zabur
Sidoo kale Kitaabka Quduuska ah waxaa nalagu amray inaan Rabbiga u sujuudno oo keliya, ama caabudno, laakiin sidoo kale waxaa jira ka -dhaafitaan. Nebi Daanyeel wuxuu helay aragti taas oo aad u sii fogeyneysa waqtiga ay boqortooyada Ilaah dhisi doonto oo araggiisa ku arkay ‘Wiilka Aadanaha’.
13 Riyadii habeennimada waxaan ku arkay mid u eg wiilkii aadan aha oo ku yimid daruuraha samada, oo wuxuu u yimid, kii da’da weynaa, oo waa loo soo dhoweeyey oo hortiisaa la soo taagay.
14 Oo waxaa la siiyey dowladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo, inay dadyowga, iyo quruumaha, iyo kuwa kala afka ahu u wada adeegaan. Dowladnimadiisu waa dowladnimo weligeed jiraysa, oo aan dhammaanayn, boqortooyadiisuna waa mid aan la baabbi’in doonin.
Daanyeel 7: 13-14
Aragtida dadku waxay u sujuudaan ‘wiilka aadanaha’, Wuxuu muujiyey awood weyn ee xagga baridda, bogsashada iyo dabeecadda inta uu dhulka ku socday. Laakiin kuma imaan ‘daruuraha cirka’ sida riyadii Daanyeel loo sii sheegay. Tani waa sababta oo ah aragtidaasi waxay sii fiirineysay mustaqbalka, oo ay dhaaftay imaatinkiisii ​​ugu horreeyay imaatinkiisa labaad – ku soo noqoshada dhulka mar kale si uu u burburiyo Dajjal (sida loo sii sheegay Hazrat Adam) oo uu aasaaso Boqortooyada Ilaah. Imaatinkiisii ​​ugu horreeyay, oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd, waxay ahayd inuu dadka ku furto dhalashada Boqortooyada Ilaah. Laakiin xitaa markaa, wuxuu ka hadlay sida isaga, Wiilka Aadanaha, uu dadka u kala sooci doono markuu ku soo noqdo daruuraha. Wuxuu horay u arkay dhammaan ummadihii isaga hor imaan lahaa isagoo sujuudsan sida Yuusuf walaalihiis ay ugu sujuudeen Yuusuf. Waa kan wixii Masiixu baray
31 Goortii Wiilka Aadanahu ammaantiisa ku yimaado, isaga iyo malaa’igaha oo dhan, markaasuu carshiga ammaantiisa ku fadhiisan doonaa.
41 Markaasuu kuwa bidixdiisa jooga ku odhan doonaa, Kuwa yahow inkaaranu, iga taga oo gala dabka weligiis ah kan Ibliiska iyo malaa’igihiisa loo diyaargareeyey.
Mataayos 25: 31-46
Hazrat Yusuf iyo Ciise Masiixh
Ka sokow ka -dhaafitaankii ay dadka kale u sujuudi lahaayeen hortooda, Hazrat Yusuf iyo Isa al Masih waxay soo mareen qaab la mid ah dhacdooyinka. U fiirso inta siyaabood ee ay noloshooda isku egyihiin.
Dhacdooyinkii Nolosha Hazrat Yuusuf Dhacdooyinkii nolosha Ciise Masiix
Walaalihiis, oo noqday 12 -ka qabiil ee reer binu Israa’iil, waxay neceb yihiin Yuusuf oo way diidaan Israa’iil (magaca Yacquub? Eebbe baa siiyey) Israaiiliyiinta oo 12 qabiil ahaa waxaay naceen Ciise Masiix oo waxaay diideen inuu Masiixa (Markos 14:62) waxayna “ku tashadeen inay nafta ka qaadaan” (Yooxanaa 11:53) Waxay ku tuuraan god dhulka ku yaal la tuuray Isa al Masih waa la iibiyey oo loo dhiibay shisheeyaha si loo tuuro Meel fog baa la geeyaa sidaa darteed walaalihiis iyo aabihiis waxay u malaynayaan inuu dhintayIsraa’iil iyo walaalkiis Yuhuuddu waxay u malaynayaan in Ciise al Masih weli dhintay weli Yuusuf
Yuusuf wuxuu sii sheegay u sajuudida walaalahii ee israaiil (Yacquub magacan waxaa siiyay Ilaah) Ciise Masiix wuxuu sii sheegay in mustaqbalka u sauudidda walaalahiis (walaaha yahuudda) ee Israaiil (Maarkoos 14:62)
Yacquub wuxuu Yuusuf u diray walaalahiis,Laakiin way diideen isaga oo waxaay ku tashadeen inay nafta ka qaadaaniyaga Ciise Masiix wuxuu aabahii u soo diray Waaalahiis yahuuda,laaliin ‘’ laakiin kuwiisii ma aanay aqbalin isaga .’’ (Yooxaana 1:11) ‘’oo waxaay doonayeen inay naftiisa ka qaadaan’’(Yooxaana 11:53)
Waxaay isaga ku tureen god dhulka dhexdiisa ah Ciise Masiix wuxuu hoos og usoo degay god dhulka hoostiisa ah
Yuusuf waa la iibiyay oo wuxuu gacanta u galay shisheeyeyaal si meesha looga saaro. Ciise Masiix waa la iibiyay oo wuxuu gacanta u galay shisheeyeyaal si meesha looga saaro.
Yuusuf waxaa laga fogeeyay walaalahiis iyo aabahiis si loogu ,maleeyo inuu dhintay. Israaiil iyo walaalkiis Yahuuda waxay maleeynayeen inuu Masiixa oo weli mayd ahaanayo.
Yuusuf wuxuu isu hooseeysiiyay sida adoon. Ciise Masiix wuxuu qaatay’’Dabeecad adoonimo ama madiidinimo’’ oo ‘ isu hooseeysiiyay inuu dhinto ‘(Filiboy 2:7)
Yuusuf dambi been ah ayaa lagu eedeeyay Yahuudii waxay si been ah’’ waxay isaga ogu eedeeyeen waxyaabo badan’’(Markoos 15:3)
Yuusuf si adoonimo ah ayaa loo xiray.halkaas oo uu ku saadaaliyay in qaarkood la dayn doono lagu xiray mugdiga godka ah. Ciise Masiix waxaa loo diray ‘’… inuu soo celiyo qalbiga jaban, oo ogu dhawaaqay xornimo maxaabiista oo ka soo furtay mugdigii xabsiga ee maxaabiista…(Ishaaciya 61:1)
Yuusuf wuxuu ku fuulayaa carshiga Masar, isaga oo ka sarreeya awoodaha kale oo dhan, isaga oo hoos imanaya Fircoon oo keliya Naftiisa. Dadka u yimaada isaga oo u sujuudsan “Ilaah baa isaga sarraysiiyey (Masiix) meesha ugu sarraysa oo siiyey magac ka sarreeya magac kasta, in magaca Ciise jilib walba jilba joogsado, samada iyo dhulka iyo dhulka hoostiisaba dhulka …. (Filiboy 2:10-11)
Intaay weli diidanaayeen oo walaalahii aminsanaayeen inuu dhintay, ayay qaruumaha ugu yimideen Yuusuf inuu siiyo rooti oo uu caawiyo iyaga. Intaay weli diidanaayeen oo aminsanaayeen xertiisa inuu dhintay xertiisii walaalahiisa yahuudda, Quruumaha masiixa ayay ogu yimideen kibista nolosha oo ah kan keliya ee siin karo iyaga.
Yuusuf wuxuu ka wax ka yiray khiyaanadii walaalihiis (Bilowgii 50:20) Isa al Masih says the betrayal by his fellow Jews was intended by God and will save many lives (John 5:24)
Walaalihiis iyo quruumuhu waxay u sujuudaan Yuusuf Daanyeel oo wax sii sheegaya Wiilka Aadanaha in “dhammaan quruumaha iyo dad kasta oo af kasta leh ay caabudeen”
Tilmaamo badan – Calaamado badan
Ku dhowaad dhammaan nebiyadii qadiimiga ahaa ee Tawreedka noloshooda waxay u ekeysiiyeen Ciise al Masih – qaababkii la dhigay boqollaal sano kahor imaatinkiisa. Tan waxaa loo sameeyay si naloo tuso in imaatinka Masiixu runtii ahaa qorshihii Eebbe, ee uusan ahayn fikirka aadanaha, mar haddii aadanuhu aysan garanayn mustaqbalka illaa hadda ka hor.
Laga bilaabo Hazrat Adam, waxaa jiray saadaalinta Masiixa. Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheegayaa in Aadan
… Waa tusaalaha kan imanaya (ie Ciise Masiix).
In kasta oo Yuusuf ku dhammaado inuu ka helo sujuudda walaalihiis, haddana diidmada, allabariga iyo ka fogaanshaha walaalihiis ayaa noloshiisa xoogga la saaray. Xooga saarista allabariga Masiixa ayaa sidoo kale lagu arkay qaabkii allabari ee Nebi Ibraahim. Yuusuf kadib, laba iyo tobankii wiil ee Yacquub waxay noqdeen laba iyo tobanka qabiil ee reer binu Israa’iil ee Nebi Muuse ka soo saaray Masar. Qaabka uu sidaas u yeelay waxay ahayd qaab saadaalinaya faahfaahinta allabariga Masiixa. Dhab ahaantii Tawreedku wuxuu lahaa calaamado badan oo faahfaahsan oo la qoray kumanaan sano kahor imaatinka Masiixa. Zabur iyo nebiyadii kale waxay lahaayeen tafaasiil dheeraad ah oo la qoray boqollaal sano ka hor Masiixa, iyadoo diidmadu ay xoogga saartay waxsii sheegista Addoonkii Dhibanaa. Maadaama aadanuhu uusan ogayn mustaqbalka boqolaal sano oo soosocda, sidee bay nebiyadani u ogaan lahaayeen tafaasiishaan haddii aysan werwerine waxyiga Ilaah? Haddii ay ahaayeen kuwo uu Illaahay u waxyooday markaas diidmada iyo allabariga Ciise Masiix waa inay ahayd qorshihiisa. Intooda badan qaababkan ama waxsii sheegyadu waxay ka hadlayeen imaatinka ugu horreeya ee Masiixa halkaas oo uu naftiisa u bixiyey si aan u furno oo aan awoodno inaan galno Boqortooyada Ilaah.
Laakiin qaabka Yuusuf wuxuu kaloo aad u sugayaa goorta la bilaabi doono Boqortooyada oo ummadaha oo dhami ay sujuudi doonaan marka Ciise Masiix uu dhulka ku soo noqdo. Maaddaama aan hadda ku nool nahay waqtigii naloogu casuumay Boqortooyada Ilaah, yeynaan noqon sidii nacaskii Al-Ma’arij oo dib u dhigay ilaa Maalinta si loo helo Bixiye-waxayna ahayd goor dambe. Hadda wax dheeraad ah ka baro nolosha Masiixa ee uu kuu soo bandhigay.
Masiixu wuxuu baray in soo laabashadiisu ay sidan ahaan doonto
addaba boqortooyada jannada waxaa loo ekaysiin doonaa toban gabdhood oo bikrado ah, kuwa intay laambadahooda qaateen, u baxay inay ninka arooska ah ka hor tagaan.
16 Isla markiiba kii shantii talanti helay ayaa tegey oo ku baayacmushtaray, oo wuxuu faa’iiday shan talanti oo kale.
17 Sidaas oo kale kii labada helayna, laba kale ayuu faa’iiday.
20 Kii shantii talanti helay ayaa yimid oo keenay shan talanti oo kale, oo wuxuu ku yidhi, Sayidow, waxaad ii dhiibtay shan talanti; eeg, shan talanti oo kale ayaan ka faa’iiday.
22 Kii labadii talanti helayna waa yimid oo yidhi, Sayidow, waxaad ii dhiibtay laba talanti; eeg, laba talanti oo kale ayaan ka faa’iiday.
27 Haddaba waxaad lahayd inaad lacagtayda u dhiibto kuwa baangiga jooga, oo goortaan soo noqdo, waxayga iyo faa’iido ayaan qaadan lahaa.
Matayoos 25: 1-30
Tags:Ibnu AadamahaNabi YacquubNabi YuusufSuuradda 12-aadSuuratul YuusufYuusuf iyo Ciise Al MaasiihYuusuf iyo Fircoon.Yuusuf iyo Walaalihiis